ढाड दुख्ने समस्याबाट कसरि बच्न सकिन्छ ? (कारण, लक्षण र बच्ने उपाय) - Parichay Network
ढाड दुख्ने समस्याबाट कसरि बच्न सकिन्छ ? (कारण, लक्षण र बच्ने उपाय)
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:३१ मा प्रकाशित
ढाड दुख्ने समस्याले धेरैलाई हैरान बनाएको छ । यो समस्याले गर्दा मानिसको दैनिक जीवनयापनलाई धेरै नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बसाईको पोजिसन नमिल्दा, धेरै समय एउटै पोजिसनमा रहेर काम गर्दा, सुताई नमिल्दालगाएत ढाडको हड्डी, नशा र मांसपेशीका कारण ढाड दुख्न सक्छ । यी थोरै उदाहरण मात्र हो । ढाड दुख्नुका कारण धेरै छन् । ढाड दुखाईको समस्या विशेषगरि गर्दनको पछाडि (घिच्रो) र नितम्ब (चाक) बीचको मध्यरेखामा हुने गर्दछ ।
यो समस्या सामान्य नभई जटिल रहेको वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ यज्ञमान शाक्य बताउँछन् । विगत ४० वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सेवा गरिरहेका डा. शाक्यका अनुसार यो समस्या जति उमेर बढ्दै गयो त्यती समस्या आउँदै जानेछ । उनी भन्छन्– ‘ढाड दुख्ने समस्या उमेर ढल्कदै गएपछि प्राय मानिसमा देखिने गर्छ । विशेषगरि ५० वर्ष कटेका मानिसलाई हुने गर्छ । उमेर ढल्कीदै गर्दा हड्डी खिईदै जाने भएकाले पाको उमेरका व्यक्तिलाई बढि देखिने गरेको छ । कलिलो उमेरकालाई समस्या नदेखिने भने होईन् तर त्यती धेरै समस्या आएको देखिदैन । हाम्रो समाजमा पुरुषभन्दा महिलालाई बढि समस्या देखिने गरेको छ । किनकी नेपालमा महिलाहरुले बढि निहुरेर काम गर्ने गरेका छन् । खाना पकाउदा, कपडा धुँदा, निहुरेर धेरै काम गर्दा महिलामा ढाडको समस्या देखिनु स्वभाविक नै हो ।’
महिलाहरुको महिनावारी बन्द भएपछि (सुकेपछि) धेरै महिलामा यो समस्या पैदा हुने गरेको डा. शाक्य बताउँछन् । ढाड दुख्ने समस्या विस्तारै बढ्दै गएर हिड्नै नसकिने अवस्थामा लैजाने उनको भनाई छ । कम्मर तथा ढाड दुख्ने, निहुरिन नमिल्ने, सिधा हुन नमिल्ने, खुट्टामा सिल्का हान्ने, खुट्टा झम्झमाउने, समस्या देखिन लागेको भाग लाटो हुने, बुढिऔलाहरु खुम्चाउन नमिल्ने, उभिन नमिल्ने, हिड्न नसक्ने जस्ता समस्या विस्तारै देखिदै जाने उनी बताउँछन् । डा. शाक्यका अनुसार कुर्चिमा बस्दा सधै पछाडीको भाग कुर्चीमा टसाएर बस्नेपर्छ । सुत्ने बेलामा सिरानी होचो राख्दा राम्रो हुन्छ ।
भुईमा बसेर निहुरेर खाने, निहुरेर काम गर्ने मानिसहरु बढिमात्रामा यस्तो समस्या लिएर चिकित्सककोमा आउने गरेको उनी बताउँछन् । पहिला पहिला १२, १४ हातको पटुका बान्ने चलन निकै राम्रो रहेको उनको भनाई छ ।
समस्या आउन नदिन व्यायाम आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । कडा व्यायामले भने असर गर्ने उनको भनाई छ । जिममा गएर कडा व्यायाम गर्नेलाई बढि देखिने गरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘भुईमा पलेटी कसेर शरिर निहुराई खाना खाने हाम्रो बानी राम्रो होईन । ढाडलाई चिसोबाट जोगाउनु पनि आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा मनतातो तेल घस्ने प्रचलन एकदम राम्रो हो तर त्यो बसेर होईन सुतेर घस्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
मोटोपनले पनि ढाडको समस्या निम्तने डा. शाक्य बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘धेरै मोटो भयो भनेपनि ढाड दुख्ने समस्या बढि हुन्छ किनकी मोटो मान्छेको पेटले ढाडको हड्डीलाई तानिरहेको हुन्छ । धेरै गह्रुङ्गो भारि बोक्दा पनि यो समस्या देखिने गर्छ ।’
पौष्टिक आहार पर्याप्त नहुँदा पनि ढाड दुखाईको समस्या आउने उनी बताउँछन । दुध, दहि, हरियो सागसब्जी जस्ता क्याल्सियम पाउने खानेकुरा खानुपर्ने उनको भनाई थियो ।
बालिचालीमा बोलिने ढाड सड्क्यो भन्ने बोलीलाई व्याख्या गर्दै उनी भन्छन्– ‘ढाड सड्क्यो भन्ने शब्द हामीले सुनिरहेकै छौ । यो ढाडमा हुने मासुको दुखाई हो । यो सामान्य काम गर्दा पनि हुन सक्छ गह्रुङ्गो काम गर्दा पनि हुन सक्छ । यस्तो भैहाल्यो भने सुतेर आराम गर्नुपर्छ । तातोले सेक्नु पर्छ । लामो पटुका छ भने ढाडमा बेरेर बान्नु राम्रो हुन्छ । दिनमा पटुका प्रयोग गर्न सकिन्छ तर राती सुत्दा निकाल्नु पर्छ । साथै तत्कालै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई चेकजाँज गराउनु पर्छ ।’
♦ किन के कारणले ढाडको दुखाई हुन्छ ?
१) हड्डी र नशाको समस्या भएमा
२) उचित व्यायाम नगर्नाले
३) लामो समयसम्म कुर्सीमा बस्दा
४) निहुरेर काम गर्दा
५) मेरुदण्ड वा लिगामेन्ट (मांसपेशी) च्यातिएमा
६) सुत्दा नमिलेर वा सुतेर पढ्दा
७) पेटको समस्या
८) मोटोपनका कारण
९) चिसोका कारण
♦ यसका लक्षणहरु के के हुन् ?
१) ढाड दुखाईको महसुस हुनु
२) दुखेको ठाउँमा तातो हुँदै जानु
३) निहुरिन नसकिने
४) ढाड सिधा बनाएर उभ्भिन नसकिने
५) खुट्टामा सिल्का हान्ने
६) खुट्टा झम्झमाउने
७) समस्या देखिन लागेको भाग लाटो हुने
८) खुट्टाको बुढिऔलाहरु खुम्चाउन नमिल्ने
९) हिँड्दा खुट्टा कमजोर हुनु
♦ समस्याबाट बच्न कस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ ?
१) सहि तरिकाले व्यायाम गर्ने
२) एउटै पोजिसनमा एक घण्टाभन्दा बढी नबस्ने
३) मेरुदण्डलाई सहज हुने गरी बस्ने
४) योग गर्ने
५) एकैचोटी गह्रुङ्गो काम नगर्ने
६) क्याल्सियमको कमीका कारण पनि हुनसक्ने भएकोले पर्याप्त मात्रामा दूध, दहीको सेवन गर्ने
७) नियमित व्यायाम गर्ने
८) मोेटरसाइकल चढ्दा कुप्रो नबस्ने
९) चिसोबाट जोगिने
१०) मदिरापान तथा धूमपान नगर्ने
डा. शाक्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालबाट २०६० सालको अवकासपश्चात आनन्दित गृह (जेष्ठ नागरिक दिवा तथा आवसिय सेवा केन्द्र) संचालन गरि सेवा गरिरहेका छन् । हाल उनी पोखराको पद्म नर्सिङ होमका प्रवन्ध निर्देशक समेत हुन् ।
yagya man sakya
लकडाउनमा पोखराका मूख्यबजार (फोटो फिचर)
प्रत्येक प्रदेशलाई भाटभटेनी समूहको २५/२५ लाख सहयोग
सहकारीले उत्पादन गर्ने दूध ढुवानी ठप्प
कोरेना पोजेटिभ देखिएपछि वेलायती प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सेल्फ आईसोलेसनमा…
कोरोना भाइरसको प्रभावले अन्नपूर्ण पदमार्ग सुनसान
चलचित्र उद्योगलाई राहत दिन संघको माग
कोरोना भाईरसबाट वच्न प्रशस्त पानी पिउनुहोस्
आहा ! रारामा आज संकटासँग आर्मी भिड्दै
विद्यार्थीको हात चिर्न लगाउने शिक्षिका……